Ny olana fototra amin’izao… | NewsMada
Ny olana fototra amin’izao…
Inona marina ny olana fototra amin’izao disadisa sy krizy politika lava izao? Miainga sy miankina amin’izay ny vahaolana. Niara-nahita sy niaina ny fifandroritana teo amin’ireo depiote mpomba sy mpanohitra ny fitondrana. Tsy inona fa ny fifanenjanana momba ny lalàm-pifidianana.
Nidina an-dalambe ny raharaha. Ny eny amin’ny Antenimierampirenena hoe lapan’ny demokrasia aza, efa very anarana hoe lapan’ny kolikoly. Teo tsinona ny fividianana depiote tamin’ny fampandaniana ny lalàm-pifidianana. Tsy nisy sahy nitory ny olom-boafidy nanolo tena ho olom-boavidy.
Tsy vitan’izany, lasa fitakiana fametraham-pialan’ny filoha… Niara-nirongatra tamin’ny hetsika ny fitanisan’ny vahoaka izay niaretany hatramin’izay: ny tsy fandriampahalemana, ny fidangan’ny vidim-piainana,ny ady sy ny fandrobana tany,ny fanaovana tantely afa-drakotra ny harem-pirenena…
Eo koa ny afitsoky ny mpitondra, mahatonga izay fahoriam-bahoaka izay: ny tsy fanarahan-dalàna, ny fivarotan-tanindrazana, ny kolikoly avo lenta,ny fanjakan’ny tsimatimanota, ny raharaham-pirenena ananan-kavana, ny tsy fahatanterahana ny teny nomena sy ny fanamby, ny fampiasana herim-pamoretana…
Izany rehetra izany no olana amin’izao, tsy mbola voavaha. Tsy izay kolikoly tamin’ny lalàm-pifidianana ihany, tsy hita izay tohiny sy farany: fanenjehana araka ny lalàna… Tsy inona no fototr’izany rehetra izany fa ny fitavozavozana sy ny tsy fahombiazan’ny mpitondra. Inona ny vahaolana?
Tsy vitan’ny fampisehoan-kery, fampanantenana, fandokafan-tena… Tsy efa izany ve hatramin’izay? Izay no itakian’ny vahoaka fanovana amin’ny tena hoe fanjakana tan-dalàna, fitondrana tsara tantana, fangaraharana, ady amin’ny kolikoly, fanafoanana ny fisian’ny tsimatimanota…
Sahy hiatrika izany ve ny mpitondra sy ny mpanao politika? Mbola mila fiovana sy fanovana koa ny ady seza amin’ny famahana olana, ny tsikombakomba ratsy, ny fiandanian’ny olom-panjakana manao politika, ny fanahiana valifaty sy atsojay… Misy hatrany ny tsy maty voalavo an-kibo?